Real Madrid oo suuragal noqon karta in bisha Janaayo ay sameyso saxiixa mid ka mid ah xidigaha Manchester City – Gool FM
Real Madrid oo suuragal noqon karta in bisha Janaayo ay sameyso saxiixa mid ka mid ah xidigaha Manchester City
(Real Madrid) 30 Nof 2018. Real Madrid ayaa la soo wareegi karta da’ayarka kooxda Manchester City ee Brahim Díaz suuqa furmi doono bisha janaayo, iyadoo aanan sugi doonin xitaa inta laga gaarayo suuqa kale soo aadan ee xagaaga.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa sheegay in Real Madrid ay suuragal tahay inay bixiso qiimaha ay saraakiisha Manchester City ku doonayaan inay ku iibiyaan laacibkan, si ay u hesho saxiixa Brahim Díaz suuqa furmi doono bisha Janaayo.
Wargeyska ayaa wuxuu hadalkiisa intaas kusii daray in Real Madrid ay ka codsatay Brahim Díaz inuusan heshiis cusub u saxiixin Skay Blues, maadaama heshiiska uu haatan ku joogo dhacayo 2019, wuxuuna xaq u yeelan karaa suuqa bisha janaayo inuu wada hadal la furto kooxda uu doono.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in sababta ay kooxda Real Madrid u xiiseeneyso adeega Brahim Díaz ay tahay awooda weyn ee ciyaareed uu heysto ciyaaryahankan xili ay da’adiisu tahay 19 jir oo kaliya.
Brahim Díaz ayaa 2 gool u dhaliyay Manchester City bishii lasoo dhaafay kulankii ay wajaheen Fulham, taasoo u horseeday inay u gudbaan wareega quarter-finalka Koobka League Cup-ka ama Carabao Cup.
Vicente del Bosque oo ka hadlay rajada ay kooxda Real Madrid ka qabi karto inay ku guuleysato horyaalka La Liga